I-Oukitel WP15: iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka | I-Androidsis
Ixesha le-5G lilapha, kodwa ngaba ikhona into ebhetele nangaphezu kokuba ne-5G kwiselfowuni yethu? Ewe, unamandla amakhulu ebhetri. I-Oukitel imalunga nokubonisa i-smartphone ngebhetri engakholelekiyo, ifowuni erhabaxa ene-5G kunye nebhetri ene-15600 mAh umthamo: yi-WP15.
Ukuthathela ingqalelo ukuba i-5G ifuna ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu, ifowuni ixhotyiswe ngebhetri enkulu ngokwaneleyo ukuba ingashiywa.
Kumsitho wokusungulwa kwayo, a Raffle kwiwebhusayithi esemthethweni. Ukuphehlelelwa kuya kusuka nge-23 ka-Agasti ukuya kwi-27 kwaye ngelo xesha ixabiso liya kuba yi- $ 299,99. Abathengi bokuqala abayi-100 baya kufumana i-smartwatch yasimahla exabisa i- $ 50. Ukuba uvela kwi-101 ukuya kwi-600, uya kufumana iseti yentloko ye-TWS yasimahla.
1 15.600 mAh ibhetri
2 Inkqubo ye-8-core kunye ne-8GB ye-RAM
3 Uyilo oluxineneyo
4 Ukucaciswa kweOukitel WP15
5 Icandelo lezithombe
6 Isikrini se-intshi ezingama-6,52
7 Inkqubo yokusebenza
8 Ixabiso kunye nokufumaneka
15.600 mAh ibhetri
Ibhetri ye-Oukitel WP15 yenye yamandla ayo kuba isinika ukuzimela ukuya kuthi ga Iintsuku ezi-4 zokusetyenziswa kwesiqhelo okanye iiyure ezili-1.300 zokulinda (Iintsuku ezingama-54) enkosi kwi-15.600 mAh. Enkosi koku kuzimela okukhulu, i-Oukitel WP15 iba yifowuni ye-5G enesikhundla esiphezulu sebhetri.
Ngomthamo omkhulu kangaka webhetri, abafana base-Oukitel bacinge ukuba iya kuba licebo elihle ukuba babelane nabanye ii-smartphones okanye izixhobo ezihlawulisa ngaphandle kweengcingo, yiyo loo nto isinika Inkxaso yokutshaja umva.
Esi siphelo si ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-18W.
Inkqubo ye-8-core kunye ne-8GB ye-RAM
Ngaphakathi kwe-Oukitel WP15 sifumana iprosesa ye-8-engundoqo eyenziwe kwaye yenziwa yiMediaTek: Ubungakanani be-500 5G, iprosesa esinokonwabela nawuphina umdlalo kwaye ikwabandakanya Ukudityaniswa kwe5G.
Enkosi kwi-chip ye-5G, siyakonwabela uqhagamshelo lweselfowuni Amaxesha ali-10 ngokukhawuleza kune-4G yangoku, ngokukhuphela kunye nokulayisha okuphezulu kwe-2,3 Gbps kunye ne-1,2 Gbps ngokwahlukeneyo.
I-Oukitel WP15 ihamba kunye Imemori ye-8 GB ye-RAM, esivumela ukuba sibe nenani elikhulu lezicelo ezivulekileyo kwaye, imidlalo efuna amandla angaphezulu, ihamba ngokutyibilika okupheleleyo.
Ukugcinwa kwangaphakathi okubonelelwa yi-Oukitel WP15 ngu I-128 GB, indawo esinokwandisa ukuya kuthi ga kwi-256 GB Ukugcina usebenzisa ikhadi elincinci le-SD.
Esi siphelo si I-SIM yesibili, esivumela ukuba sisebenzise iiSIM ezimbini ngokudibeneyo, kodwa siphulukane nethuba lokwandisa indawo yokugcina. Oko kukuthi, nokuba sisebenzisa ii-SIM ezimbini kwifowuni kwaye silungisa i-128 GB yokugcina okanye sisebenzisa i-SIM kwaye sandise indawo ukuya kuthi ga kwi-256 GB ngekhadi le-SD elincinci.
Ukuba ufuna ukusebenzisa iGoogle Pay ukwenza iintlawulo zemihla ngemihla ungayenza ngaphandle kweengxaki nge-Oukitel WP15, kuba ine NFC chip.
Ukongeza, ibandakanya impinda ye-Wi-Fi, umsebenzi osivumela ukuba sandise isiginali ye-Wi-Fi kwindawo yethu ukuze ifikelele kwinani elikhulu lezixhobo, umsebenzi ongakhe ube buhlungu ukubakho, kwiindawo apho ukugubungela iWi-Fi kubonakala ngokungabikho kwayo.
I-Oukitel WP15 isinika a uyilo lwekhabhoni yefibre yoyilo, Uyilo olongeza ukhuselo olongezelelweyo kumachaphaza ngengozi kunye namaqhuma.
Ukongeza, ibonelela ngo-cI-IP68, IP69K kunye neMIL-STD-810G ziqinisekisiwe, isiqinisekiso somkhosi esinokusifumana kuphela kwii-mobiles ezenzelwe ukukhusela isixhobo ngaphambi kwako nakuphi na ukubetha okanye ukuwa.
Ndiyabulela kwesi siqinisekiso, sinako cwilisa isixhobo ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha ngaphantsi kwamanzi imizuzu engama-30, ke kulungile ukuba uyise elwandle, echibini kwaye ukonwabele ikhamera yakho kuyo nayiphi na imeko esizifumana sikuyo.
Ukucaciswa kweOukitel WP15
Isikrini: 6.52-intshi 720 × 1600 pixel HD
InkquboI-700-core MediaTek Dimension 8 ngenkxaso yenethiwekhi ye5G
Igrafu: I-ARM G57
Imemori ye-RAM: I-8GB
Indawo yokugcina: I-128GB iyandiswa iye kwi-256GB nekhadi le-TF
Iikhamera zangasemva: 48MP (Sony) + 2MP + 0.3MP
Ikhamera yangaphambiliubukhulu: 8MP
kulayishwa izibukoI-USB-C 9v2a 18W iyahambelana nokutshaja ngokukhawuleza.
ImijeloI-Dual-SIM okanye iSIM + Micro SD
Iziqinisekiso: IP68, IP69K kunye neMIL-STD-810G
Ibandakanya NFC chip ukwenza iintlawulo
Ukufumaneka kombala: mnyama
Abafana abavela e-Oukitel abalityesheli icandelo lokufota kwaye i-WP15 ibandakanya iseti yeekhamera yenziwe ziilensi ezi-3. Iilensi eziphambili zenziwe nguSony (njengoninzi lwee-smartphones kwimarike) kwaye ifikelela kwi- Isisombululo se-MP eyi-48.
Ecaleni kwe-sensor ye-MP eyi-48, sifumana 2 MP isivamvo esikhulu esivumela ukuba sithathe imifanekiso yeenkcukacha kunye nekhamera ebonakalayo eyi-0,3 MP eyenzelwe yona fiphaza imvelaphi yemifanekiso.
Ifleshi ibetha ngokukodwa kule ndawo, isibane esimile V yenzelwe ukunika ukukhanya okukhulu kwiifoto kunye neevidiyo kwaye xa sisebenzisa i-smartphone njengethotshi ngaphandle okanye ngaphakathi.
Ngaphambili, sifumana ikhamera ye-8 MP, ikhamera esinokuyisebenzisa vula itheminali usebenzisa ubuso bethu kwaye ikwasebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukuphelisa ukungafezeki okuncinci ebusweni.
Isikrini se-intshi ezingama-6,52
Isikrini esibonelelwa yi-Oukitel WP15 sifikelela kwifayile ye- 6,52 intshi, isinika isisombululo se-HD + kwaye inenani lomlinganiso we-18: 9, ilungele ukubukela imovie okanye uthotho ngaphandle kokubandezeleka kwebhendi emnyama eboniswe kwiziphelo ezinomlinganiso ophakamileyo.
Ingqibelelo yesikrini ikhuselwe kwimikrwelo eyenzeke ngengozi kunye nokuhlikihla umbulelo ku Itekhnoloji yeCorning Gorilla. Okwangoku, ayikaze ibe buhlungu ukusebenzisa isikhuseli sekhusi.
Ngaphakathi kwe-Oukitel WP15 siyazifumana Ivenkile ye-Android 11, eya kusivumela ukuba sonwabele yonke imisebenzi eyenziwa nguGoogle kule nguqulo ngaphandle kokwenza umaleko ngokwezifiso, Efumana inani elikhulu lamanqaku ngokuthelekiswa nezinye iiterminal ukuba awufuni ukuba ulungelelwaniso lolwenziwo lwabenzi abaninzi lonakalise amava akho omsebenzisi.
Le smartphone intsha ivela kumenzi weOukitel, inexabiso kwi IRandi ye299,99 kwaye ingathengwa ukusuka nge-23 ka-Agasti. Ukubhiyozela ukumiliselwa kwemakethi ye-Oukitel WP15, umenzi wayo iya kunika i-smartwatch exabisa i-50 yeedola kubantu bokuqala abayi-100 ababeka iodolo.
Ukuba ufike emva kwexesha, kodwa uku-odolo zokuqala ezingama-600, uyakufumana isipho, ngakumbi ezinye Iingcingo ezingenazingcingo. Ukuba awufuni kuphoswa leli thuba kwaye ulisebenzise eli thuba lokwazisa, kuya kufuneka ngokusebenzisa le khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Oukitel WP15: iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka